मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ ! – Wow Sansar
January 29, 2021 144
Nextवैदेशिक रोजगारमा ड,रला,ग्दो छ,ड्के। हेमराजले सिधै भने हाकिमलाई कु,र्सिबाट घि,र्सार्छु, भाई हि,म्मत छ भन्दै थ,र्काए ! आधा घण्टामा जे,ल हा,ल्छु…..(भिडियो सहित)